Uqhanqalazo lwamaFama: Amafama anikela ingqalelo ukuba iinkokheli zakho zoqhanqalazo azingobameli baka-rhulumente: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	16 Oktobha 2019	• 5 Comments
Kutshanje bendibuzwa ukuba ndifuna ukuxhasa uqhankqalazo lwabalimi. Ndaphendula ngempendulo emfutshane necacileyo. Ewe ndiyaluxhasa uqhankqalazo lwabalimi, kodwa akufuneki siguqukele kwezopolitiko, kuba yingxaki 'kwindawo yokuqala'. Ukuqhankqalaza eNetherlands akukho nto ngaphandle kokuvalwa ngokupheleleyo. Kuya kufuneka ube nemvume; Chaza ngokuthe ngqo ukuba leliphi ixesha uye kweliphi ixesha; Zingaphi iitrektara kwiMalieveld; ujikelezwe ngumtya wamapolisa onke aphantsi kolawulo lweendlebe. Sukwenza ngaphezulu! Into kuphela esebenzayo kukutshintshwa kwayo yonke imithetho. Kodwa awungekhe ubize oko, kuba kunokohlwaya.
Ndicebisile ke ukuba zonke iinkomo ziphume nje ziye kuhlala emadlelweni kunye namadlelo kwaye izigidi zeenkomo kunye neehagu zizele zizitalato. Masibone ukuba yintoni edala isiphithiphithi!
Ayisoze yenzeke loo nto. Abalimi ngekhe benze loo nto, kuba baya kuba belahlekile kwimithombo yabo yemali. Kwaye ukuba sele sifumana isiphithiphithi, ke yile nto ifunwa ngurhulumente. Uvukelo lwe I-Pegida ngokuchasene ne-Antifa isilele ngokupheleleyo. Inkuthazo yenani labemi bomthonyama ngokuchasene nabafikisayo abangamaSilamsi (eneneni abasekho abatsha) isilele. Ayizukuphumelela tu kwaphela ezo zivukelo zithandwayo! AmaDatshi awanakutshiswa ngaphambili. Ngaba ufuna isiphithiphithi njengombuso? Kukho enye kuphela indlela. Ukubetha elo qela liseneebhola: amafama. Banazo izixhobo ezifanelekileyo ukwenza isiphithiphithi. Kwaye kwiziphithiphithi zenza ucwangco. Le yimithetho yakudala yamaRoma. Ewe, bantu abathandekayo: urhulumente ufuna isiphithiphithi!
Urhulumente ufuna amaxesha ngamaxesha ukuba akwazi ukwakha ngaphezulu kwamapolisa. Ke ukuba ufuna ukukhanya okuluhlaza ukuthumela izixhobo ezinobuninzi eNetherlands, kufuneka utshaba. Olo tshaba ngoku lwenziwe ngobukrelekrele kakhulu ngokwenza ukuba abantu abantsundu bacatshukiswe ziimfuno ezingenakwenzeka ngokubhekisele kwisivumelwano sika Izinto ezikhupha initrogen. Ke masithi: amafama uyaxhatshazwa ngenxa yesiphithiphithi ekufuneka sinikezelwe yi-alibi ukulungiselela ukwakhiwa kombuso ngamapolisa.
Umbuso uyafuna ukuthumela umkhosi kwaye inezithuthi ezintle ziphathwayo ngoku apha naphaya. Ukuba unabantu abaphethe izixhobo (ngaphandle kokuzenzela) fake Mocro mafia -enye i-alibi yamapolisa amaninzi), awunaso isizathu esihle sokwakha umkhosi wamapolisa okhusela i-elite ebantwini.
Ke kutheni urhulumente efuna yonke le nto? Kutheni urhulumente angafuna ukwakha urhulumente? Kutheni le nto beqala ukudala isiphithiphithi ngaloo nto? Ewe, yonke into onokuyakha emapoliseni nasemkhosini, ulawulekile kwaye uvalelwe, uqinisekisa ukuba unokulawula umcimbi ukuba idangatye ngokwenene ukwethuka kunye nezigidi zabantu ngokwenene uyagula kukuphalaza. Ukwakhiwa kombuso wamapolisa onjalo kuthathwa ngokuba 'kuyimfuneko kakhulu'. Kuza ixesha apho abantu ngokwenene ngomqolo wakho ngokuchasene nodonga kwaye ke udinga uninzi (oluninzi) lwamapolisa axhotyiswe ngengqondo kunye neiyunithi zomkhosi, ngezixhobo ezininzi kunye nezixhobo ezikhulu.
IHague, 12 Okthobha 2018
Inkqubo yokuTshintshwa kweZithuthi ezihamba ngamavili (i-DVOW) ichaphazela ukutshintshwa kwezithuthi zakudala ezinamavili ezinjenge-DAF, Mercedes Benz kunye neLandrover, kunye neziqulatho zemisebenzi ethile kuzo zonke izinto zokhuseleko. Ngale leta ndikwazisa ngovavanyo ngokutsha lwenkqubo ye-DVOW apho kuthengiswa ezinye iimoto. Oku kuthengwa kufuneka kusombulule iibhloksi ngokubakho kwezithuthi ezisebenzayo kunye nokonyusa ukungasazeki komkhosi oxhobileyo.
Ndiqinisekile ukuba i99% yabalimi abathatha inxaxheba koluqhanqalazo luyinyani. Kusengqiqweni ukuba abantu abaninzi bangasayithandi. Le vidiyo ingezantsi ingumzekelo obalaseleyo wento! Ndinento engakumbi endinokuyenza kwaba bantu. Umbuzo kuphela kukuba iinkokeli azizifihlakali zelizwe loqhanqalazo olunje.
Kule meko, ndicebisa amafama ukuba abukele ifilimu ethi "Surrogates" kunye noBruce Willis kwaye babone indlela iintshukumo zoqhankqalazo zihlala ziqhutywa zii-covert pawns zamandla. Le yimigaqo yobudala. Abo basemandleni bayazi ukuba abantu baya kuhlala bethambekele kwimvukelo, ngoko baqeqesha i-pawns ukuba bayivumele ukuba ingene kwiqela elithile ekujoliswe kulo. Amashumi eminyaka wolungiselelo angandulela oku, kuba iskripthi master (jonga eyam incwadi entshaIsicatshulwa esidala senkulungwane. Oku kunika amandla ixesha lokubeka i-pawns yazo phantsi kweqela ngalinye lengcali kunye noluntu (ngemibutho eyimfihlo). Ke yena uVladimir Lenin (okhokele kuguquko lwaseRussia kwaye unako ukuxhasa uloliwe ogcwele igolide yeZionist): Eyona ndlela ilungileyo yokulawula inkcaso kukukhokelela ngokwakho!
Amafama ke ngoko, ndiyakholelwa, aqhutywa ngabom ngemithetho emitsha, kuba urhulumente ufuna ukuvukelwa okulawulwayo kwenza enye i-alibi ukuze babe nako ukwanda amapolisa. Iskripthi esiyi-master yile: isiphithiphithi sokuqala eYurophu; emva koko buyisela iodolo. Funda apha ngubani lowo ndiza kululama.
Uludwe lwekhonkco lovimba: officielebekendmakingen.nl, volkskrant.nl, volkskrant.nl
Hamba iqela lakho lokubhikisha
Umboniso we-Pegida IHague 10 Ngo-Ephreli 2016 yafaka ubungqina obubi (iifoto namavidiyo)
tags: amafama, Ukuzikhusela ngokubanzi, VELA, eziziimbalasane, ukuzibophelela, ukubheja, umkhosi, Malieveld, Maliveld, Iyasebenza, imvukelo, uqhankqalazo, mbhikisho, Iitrektara, Ukutshintsha, Izithuthi ezinamavili
16 Oktobha 2019 kwi-07: 01
Jonga ukuba iinkokeli zakho zoqhanqalazo zingamalungu eqela lenkululeko okanye, umzekelo, iklabhu efana neNgonyama klabhu (ukusasazeka kwemibutho yabucala).
16 Oktobha 2019 kwi-14: 23
Iitroli zikarhulumente eMadurodam? Asikokuphela kwenqanawa sihamba ngeVrijland ...?
ps: ungalibali iklabhu yeRotary ary
16 Oktobha 2019 kwi-15: 48
NgokweNederlandsche Propaganda Omroep, le yimizekelo yeendaba ezingezizo:
“Ewe akukho ziinkuni kweli bali. Izolo bekukho iiarhente zaseburhulumenteni kulo mboniso, kodwa bakhona kuphela ukuba "babeke iliso", utshilo uSteven van Santen. "Amapolisa soze azame ukwenza ubundlobongela. Umsebenzi wabo ngqo ukukhusela imeko ukuba ingaphumi esandleni. "
16 Oktobha 2019 kwi-18: 08
"Kulungile bhuti kodwa ngoku ndiyazi ukuba awusoze uyilahle eyakho inyama"
16 Oktobha 2019 kwi-18: 38
kwaye injalo nje indlela ... Commando ab chao
UmProtestanti: ikhabinet ifuna 'imfazwe yamakhaya'
« URuinerwold Drenthe kunye nosapho lwakhe, ukusebenza kwengqondo elandelayo (PsyOp) ukuya kwisimo samapolisa ngaphezulu
I-PsyOp ye-ghost 'yokusebenza kwengqondo': ukuthatha amalungelo akho kunye nokwazisa 'ngamapolisa engqondo' »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.035.847
SalmonInClick op UNicky Verstappen uJos Brech umalunga nokwamkela uvimba wedatha ye-DNA malunga ne-DNA yakho kwi-Intanethi